Baarayaasha Shiineysku waxay horumariyaan aerogels kaarboon culus oo dab-dhal ah | Jrain
Waxaa dhiirrigeliyay dabacsanaanta iyo adkeysiga websaydhyada dabiiciga ah ee caarada, koox cilmi baaris ah oo uu hoggaaminayo Prof. YU Shuhong oo ka socda Jaamacadda Sayniska iyo Teknolojiyadda Shiinaha (USTC) ayaa soo saartay qaab sahlan oo guud oo lagu been abuuro superelastic iyo daal u adkeysan kara aerogels kaarboon culus oo leh nanofibrous qaab dhismeedka shabakada adoo adeegsanaya resorcinol-rasmidehyde resin oo ah isha kaarboon adag.
Tobannaankii sano ee la soo dhaafay, aerogels kaarboon ayaa si ballaaran loo baaray iyadoo la adeegsanayo kaarbo garaafyo garaafyo iyo kaarbo jilicsan, kuwaas oo muujinaya faa'iidooyinka superelasticity. Aerogels-ka dabacsan ayaa sida caadiga ah waxay leeyihiin dhismayaal jilicsan oo jilicsan oo leh iska caabin wanaagsan laakiin xoog badan. Kaarbadaha adag ayaa muujinaya faa iidooyin badan xagga farsamada iyo xasilloonida qaab dhismeedka sababtoo ah qaab dhismeedka turubka ee “3-of-cards ”turkstikada qaab dhismeedka. Si kastaba ha noqotee, adkaanta iyo jilicsanaanta waxay si cad u qaadaa jidka lagu gaarayo superelasticity leh kaarboonka adag. Illaa iyo hadda, weli waa caqabad inay tahay been abuurista hawo-karboodu-adag ee superelastic adag.
Awoodda polymerization ee macaamiisha resin waxaa lagu bilaabay jiritaanka nanofibers sida qaab dhismeedka loogu talagalay in lagu diyaariyo hydrogel leh shabakadaha nanofibrous, oo ay ku xigto qalajinta iyo pyrolysis si loo helo kaarboonka adag. Inta lagu gudajiro polymerization-ka, macaamilku wuxuu dhigaa shaashadda shaashadda wuxuuna isku dhejiyaa kala-goysyada fiber-fiber-ka, taasoo ka dhigeysa qaab dhismeedka shabakadda aan tooska aheyn oo leh kala-goysyo adag oo xoog leh. Intaa waxaa dheer, dhismayaasha jireed (sida dhexroorrada nanofiber, cufnaanta aerogels, iyo guryaha farsamada) waxaa lagu xakamayn karaa iyadoo si fudud loo habeeyo shaashadda iyo xaddiga alaabada ceeriin.
Sababo la xiriira nanofibers kaarbooni adag iyo kala-goysyo badan oo alxamay oo ka dhex jira nanofibers, aerogels adag ayaa soo bandhigaya jilitaan jilicsan oo jilicsan, oo ay kujiraan awood-sare, xoog sareeya, xawaare aad u dhakhso badan oo soo kabasho ah (860 mm s-1) iyo tamar yarida oo sifiican u dhimman ( <0.16). Ka dib markii lagu tijaabiyey wax ka yar 50% culeyska 104 wareegga, kaarboonka hawada ayaa muujinaya kaliya 2% caloosha balaastigga ah, waxaana ay haysaa 93% walwal hore.
Hawada adag ee kaarboon-gaas ah waxay sii wadi kartaa super-elasticity ee xaaladaha adag, sida dareeraha dareeraha ah. Iyada oo ku saleysan astaamaha soo jiidashada leh ee farsamada gacanta, gaaskan adag ee kaarboonka leh wuxuu ballan qaadayaa adeegsiga dareemayaasha walaaca ee xasiloonida sare iyo baaxad ballaadhan oo ballaadhan (50 KPa), iyo sidoo kale fidinno fidin ama jiheeyeyaal la riixi karo. Qaabkan wuxuu ballan qaadayaa in la balaarin doono si loo sameeyo waxyaabo kale oo nafaqeeyayaal ah oo aan kaarboonka ku jirin oo wuxuu bixiyaa qaab rajo leh oo loogu beddelo walxaha adag adkaha ama qalabka dabacsan iyaga oo qaabeynaayo dhismayaasha nanofibrous.
Fiberlass-ka Farsamaysan, Mashiinka Dabaysha ee FRP, Mashiinka Dabaysha Fiberglass, Caaryada, Dhoolatus gacmeed, Mashiinka Dabaysha ee GRP,